Fandraisana an'i Jesoa - Mana isan andro
Fandraisana an'i Jesoa
Toriteny GBT, GBPE, MRE, SEMINERA …
Toriteny maro izay manampy sy manoro hevitra amin’ny tena handraisana an’i Jesoa amin’ny fiainana. Maro dia maro ireo zavatra izay mandalo eo amin’ny fiainantsika, ary indraindray mampanontany tena hoe maninona ary aho no mbola manota? maninona no mbola varina indraindray? Maninona aho no matahotahotra? Inona no sitrapon’Andriamanitra ny amin’ny fiainako?
Zavatra roa no tsara ho fantatra :
Mila mandray ny fanahy masina mba tena hiaraka amin’i Jesoa Kristy:
Mila mibebaka ny amin’ny fahotana isika. Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin’i Petera sy ny Apostoly namany hoe: Ry rahalahy, inona no hataonay? Ary hoy Petera taminy: Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa amin’ny anaran’i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. Asan’ny apostoly 2:37,38
Mamela ny fanahy masina hitondra ny fiainana: avy aminy no hahitantsika ny lalana izay sitrapon’Andriamanitra, ary koa hampiova antsika ho olom-baovao ka tsy hanota intsony.
Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin’i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany? Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao. Romana 6:3,4
Pantekosta – Pentecôte
Amour Infini de Dieu
Ihoby Rakotomanga, Teny zaraina, Texte
Manasa anao izahay